Wararka - Toban talo oo ku saabsan dayactirka saxda ah
Toban talooyin oo ku saabsan dayactirka saxda ah
Maxay iskaga mid yihiin saacadaha, sabuurada iyo mashiinada warshadaha? Dhammaantood waxay ku tiirsan yihiin jaangooyooyin si ay u ilaaliyaan dhaqdhaqaaqooda wareega ee wareega. Si kastaba ha noqotee, si loo gaaro kalsoonida, waa in la ilaaliyaa oo si sax ah loo maareeyaa. Tani waxay hubin doontaa nolol adeegsi dheer qaadasho, ka hortagga arrimo badan oo caam ah oo ka dhalan kara qaadista guuldarro iyo waqti dhimis qaali ah. Halkan Wu Shizheng, oo ah agaasimaha maamulka ee shirkad takhasus gaar ah u leh alaab-qeybiyeyaasha, JITO Bearings, ayaa sharraxaya toban talooyin oo sare oo ku saabsan daryeelka ugu fiican.
1. Si sax ah u xajiso oo u keydi
Si looga fogaado wasakhda ay ku jiraan qoyaanka, boodhka ama wasakhda galaya dhalista, waa in loo maareeyaa oo loo dhigaa si sax ah. Marka hore, jihada waa in lagu keydiyaa si toos ah baakidhkooda asalka ah jawi nadiif ah, qalalan iyo qol. Marka saa'idka si aan loo baahnayn loo maareeyo, tusaale ahaan, haddii duubitaankooda si dhakhso leh looga saaro, tani waxay u horseedi kartaa daxal ama wasakh. Dhalitaanku waa qaybo jilicsan waana in si taxaddar leh loola dhaqmaa. Sidan oo kale, qaybaha la tuuray waa in aan loo isticmaalin maxaa yeelay taasi waxay u horseedi kartaa fashil deg deg ah.
2. Adeegso qalab takhasus leh
Intaa waxaa sii dheer, qalabka habboon waa in la adeegsadaa marka la xirayo qalabka wax lagu dhejiyo. Qalabka aan ku takhasusnayn isticmaalka inta lagu gudajiro kor u qaadista iyo geedi socodka kala-baxa ayaa sababi kara waxyeelo aan loo baahnayn, ilkaha iyo xirashada. Tusaale ahaan kuleyliyaha kuleyliyaha ama kuleyliyaha wax lagu shubo, waxaa loogu talagalay gaar ahaan saa'idka.
3. Hubi guryaha sita iyo usheeda dhexe
Kormeer xaaladda jireed ee hoyga iyo wiishka kahor intaadan kor u qaadin culeyska. Isticmaal maro jilicsan si aad u tirtirto dusha sare ee nadiifka ah, ka hor intaadan iska baran habka kor u qaadista saxda ah.
4. Si saxan u fuul
Waa inaad isticmaashaa habka saxda ah markaad kordhineyso jihadaada tanina way kaladuwan tahay iyadoo kuxiran nooca dhalida iyo nooca ku habboon. Giraangiraha kubbadaha Radial-ka ah waxaa lagu dhejin karaa noocyo kala duwan oo isku dheelitirnaan ah laga bilaabo is-riixriiqyo ilaa xirmooyinka saxaafadda oo adag, iyadoo kuxiran nooca culeyska, xawaaraha iyo heerarka gariirka. Cadaadis saarida giraanta qaldan marka aad xirxireyso waxay u horseedi kartaa dhaawac soo noqnoqda walxaha wareega. Sidoo kale, xad-dhaaf xad-dhaaf ah ama xad-dhaaf ah oo ku habboon, dhammaystir liita oo ku saabsan kuraasta qaadista ama ka baxsan fallaadha wareega ama guryaha waa in sidoo kale laga fogaadaa.
5. Si sax ah u mari saliidaada
Mid ka mid ah sababaha horseed u noqoshada guuldaradu waa cillad soo saarista. Tani waxay soo koobeysaa iyadoo la isticmaalayo saliid khaldan, iyo sidoo kale isticmaalka saliid aad u badan ama aad u yar. Saliida saxda ah waxaa lagu doortaa iyadoo la tixgelinayo xaaladaha deegaanka, heerkulka, xawaaraha iyo culeyska. Khabiir takhasus u leh dhalmada ayaa awoodi doona inuu kugula taliyo ciyaarta ku habboon saliidaha wuxuuna xakameyn karaa sifaynta dhalista illaa dhowr miligram. Marka, haddii aad u baahan tahay buuxsi dufan yar, caadi ah ama sarreeya, waxaad ku badbaadi doontaa inaad ogaato in saliiddaadu aysan wax dhibaato ah u horseedi doonin khadka dambe.
6. Ka fogow heerkulka ka baxsan xadka dhalmada
Haddii biraha birta lagu kululeeyo meel ka sarreysa xadka loogu talagalay, tani waxay si joogto ah u beddeli kartaa ama u jilcin kartaa qalabka wax lagu sido, taasoo keeneysa hoos u dhac ku yimaada awoodda qaadista culeyska waxayna u horseedaa qalab qalad. Xulashada shey ku habboon xadkaaga qalliinka hawleed waa tallaabada ugu horreysa. Inta lagu jiro dayactirka joogtada ah, fiiri midabka midabbada, walxaha rogrogmada iyo baqashada, maadaama tani ay muujin karto kuleyl. Tani waxay noqon kartaa natiijada heer kulka xad dhaafka ah ee hawlgalka iyo saliid aan habooneyn waxayna u baahan tahay inaad si deg deg ah u fiirsato.
7. Meesha ay suurta gasho, ka hor tag daxalka
Daxalku waa cadowga dabiiciga ah ee saa'idka. Waqti ka dib, haddii saa'idka u nugul yihiin qoyaan, daxalku wuu dhici doonaa. Tani waxay u horseedi kartaa inuu miridhku galo jidka tartanka iyo ugu dambayntii, dhalmo dhicis iyo qalab la'aan. Xirashada galoofyada waxay xaqiijineysaa in dhidid ama dareerayaal kale aysan soo gelin dhalmada. Markaad si gaar ah u qaabeyneyso bey'adaha wax halaagga, xulashada saxda saxda ah waa furaha. Tusaale ahaan, xulashada 316 bir birta xambaarsan oo leh shaabbaddo badanaa waa xulasho wanaagsan xagga bay'ada badda ama kiimikada.
8. Si taxaddar leh u dooro bedelkaaga
Haddii culeysku gaadho dhamaadka noloshiisa hawlgalka, ku beddel boorsadaada mid u dhiganta ama ka tayo sarraysa tan asalka ah. Beddelka tayada-hooseeya waxay u dhowdahay inuu fashilmo waxayna u horseedi kartaa qalab qaali ah oo sii xumaanaya mustaqbalka fog.
Waa dhif iyo naadir in cilad-qaadiddu dhacdo iyadoo aan wax calaamado digniin ah la helin. Qaylada badan ama gariirka ama heerkulka oo kordha waxay astaan ​​u noqon karaan dhibaato qoto dheer. Haddii wax soo saariddu muujiyaan cilladaha hawlgalka, waa in si dhow loola socdaa.
10. U yeer khabiirada
Ugu dambeyntiina, haddii aad shaki ka qabtid, raadso caawimaad khabiir. Khabiir takhasus u leh dhalmada ayaa awoodi doona inuu kugula taliyo adiga habka ugu fiican ee dayactirka ee dalabkaaga qaaska ah wuxuuna awoodi doonaa inuu kaa caawiyo inaad ogaato dhibaatooyinka foosha. Waxay noqon kartaa mid fudud sida dirista dhibaatooyinkaaga khubarada, kuwaas oo kormeeri doona oo dib u qiimeyn ku sameyn doona saa'idkaaga haddii loo baahdo.
Waqtiga boostada: Mar-04-2021